Ndeipi mari yemadhora yekutenga kutanga kugadzira yedu portfolio ye crypto zvinhu | Gadget nhau
Ndeipi cryptocurrency yekutenga kutanga kugadzira yedu portfolio ye crypto zvinhu
Kunyangwe iwe usinga fanirwe kugara sechirevhani svosve murungano, hazvina kuchenjera kungoita sekikada chete, uye nekudaro gadzira dura rekukosha, kunyangwe richizvininipisa, haritomborwadzi. Kana isu tichinzwawo kunge tine ruzivo, tinogona kusarudza pfuma yemari, cryptocurrencies, kuti kune vechidiki isu hatigone kuziva kuti irikuenda kupi, inogona kusimuka sekupupa furo, kunyura zvinosiririsa kana kuwana kudzikama kwakafanana neiko parizvino kunakirwa nemari yefiat (ingangove mari yakakosha pasi rese).
Kana isu tichizongotarisa pane akakosha zvakanyanya, inogona kunge iri mari shanu; iyo inozivikanwa Bitcoin, vamwe vanhu tenga Ethereum, kana zvimwe Bitcoin Cash, XRP kana Tether. Aya mashanu ndiwo ekutanga mune capitalization renji, kana tichida kutarisa kukosha pamunhu wega cryptocurrency chinzvimbo chinosiyana zvakanyanya, ehe, izvo zvisingambo shanduke chinzvimbo chekukudzwa, icho chinogara chichigarwa neBitcoin.
1 Iyo 5 inonyanya kukosha
Iyo 5 inonyanya kukosha
Bitcoin (BTC) yaive yekutanga, ndiyo iyo iyo ine kukosha kwakakwirira pamari imwe, pa $ 8.165 pamari ye cryptocurrency yaive muna Gumiguru 9, 2019. Pamusoro pezvo, kunyangwe iri kurasikirwa pasi sezvo vatambi vatsva vachijoinha mutambo uyu, inotarisisa huwandu hukuru hwemari yemakesi ese emadhora, angangoita mamirioni 147 emadhora, kuti uwane pfungwa ye kudzvanywa kweBTC zvakare mune ichi chinhu. Inotevera nenhanho yemari, Ethereum, inounganidza huwandu hwemari ingori pasi pemakumi maviri emabhiriyoni emadhora, ayo kune rimwe divi, inofanirwa kutaurwa kuti haina kushata zvachose.
Sekupedzisira poindi yakanaka, kana iwe uri wakasununguka, huwandu hwakawanda hweBTC ndeye mamirioni makumi maviri nerimwe, parizvino pakati pemamiriyoni gumi neshanu nemakumi masere emamiriyoni acho akacherwa, uye hakuchazove nemumwezve, nekudaro unenge usisina denda. wepa inflation uye inowedzera hunhu hwayo hwekuchengetedza.
La wechipiri mukukakavara mabasa, ave kuda kupedza chikamu chechitatu chaGumiguru, madhora zana nemakumi manomwe nematanhatu paEthereum (ETH), haisi yechipiri inonyanya kukosha (muna Gumiguru 176 ichiri Mugadziri, iine madhora angangoita mazana mana nemakumi matanhatu pamari), asi iri pakati pe inonyanya kukosheswa, ndiani asingade kuve neETH shoma mune yavo crypto chikwama? Kunyangwe ingangoita ese madhijitari emari anogona kutengwa nezvikamu zvavo, kureva kuti, unogona kutenga zvikamu zvavo, hazvidikanwe kuti zvitenge zvizere, ETH inotibvumidza kuti tiwane iyo yese yefa tisina kubhadhara kuwedzeredza huwandu hwemari.
Iine kukosha kunowanzo famba kubva kupera kwa Chikumi wegore rino kutenderera kota yedhora, iyo Ripple cryptocurrency ine capitalization ye $ 12 bhiriyoni.
La BTC forogo inochengetedza yakawanda yemukurumbira wemari yemubereki, kwete yekutengesa pasina chinhu pamadhora 231 anoyevedza pamari imwe chete, tichifunga kuti yakatanga gore kutengeserana ne $ 113 pasisina.
Tether, ane yazvino yekutengesa kukosha inenge madhora 1, yakasungirirwa uye inotsigirwa nefiat currencies, inoidzivirira kubva mukusagadzikana kwemamwe macryptocurrencies, zvese mukutarisana nenjodzi uye dzakapinza spikes, izvo zvingangorega kuita iyo yakakodzera cryptocurrency kana iwe uchida.kufungidzira.
Hatizive zvichaitika mune ramangwana, asi zvinoita sezviri chokwadi ndechekuti munguva pfupi pfupi cryptocurrencies ichave nesu uye ichiramba ichisimudza zvishuwo neruvengo zvakafanana. Kana isu tisiri veboka rechipiri, zvinokodzera kuti zvisvike pakuzvitora sekudyara uye nekutevera nhau dzakanangana navo.
Kana vakapedza 2018 pamusoro pemitengo yaive yakawanda yavo pakuzvarwa, asi pasi pazasi iyo mitengo yakasvika kumagumo e2017Icho chokwadi chekuti pakupera kwaJune BTC chaive chakapetwa kakapetwa kanokwana kubva pamwedzi mitanhatu yapfuura hachifanirwe kuenda chisina kucherechedzwa, uye padiki padanho zvakafanana zvinogona kutaurwa nezveanenge ese makuru madhijitari.
Ehezve izvi hazvireve kuti vachamuka zvakare, munyika yezvemari hapana chechokwadi, asi izvo zvinoita sekuratidza ndezvekuti, zvinopesana nezvakafungwa nevanozvidza, mari yemadhora ichine tambo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Technology » Cryptocurrencies » Ndeipi cryptocurrency yekutenga kutanga kugadzira yedu portfolio ye crypto zvinhu
Maitiro ekudzivirira iyo INE kubva kunyoresa nzvimbo yako
Iwo mafirimu akanakisa ekuona iyi Halloween paNetflix uye HBO